Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A December 2012 (3)
Q and A December 2012 (3)
1. အခု သမီးအမေက သွေးတိုးရောဂါ အခံရှိတာကြာပါပြီ။
2. သမီး သူငယ်ချင်းဆီကနေ ဆရာ့အကြောင်းသိရလို့ လှမ်းမေးလိုက်တာပါ။
3. Thank you so much for your prompt reply.
4. ကျွန်တော့်အသက် ၃၂။ အိမ်ထောင်ရှိ။ ကလေးမရှိ။
5. ကျွန်တော့် သမီးလေးဟာ အသက်သုံးလရှိပါပြီ။
6. ဆရာ စနေနေ့က ဆေးထိုးရတယ်။
7. သမီးအခု ကိုယ်ဝန် ၇ လ ထဲမှာပါ။ နှာအရမ်းမွှန်နေလို့
8. ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးအကြောင်းလေးပြောပြပြီး မေးချင်လို့ပါ။
9. သမီးအစ်မက မျက်ရိုးတွေ တအားကိုက်နေလို့ဆိုပြီး
10. ကျွန်မက အရမ်းပိန်လို့ပါ။
11. မေမေ့ x-ray အဖြေနဲ့ CT Scan အဖြေကို ကျေးဇူးပြုပြီး
12. သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးခိုင်းလို့ပါ။
Fri, Dec 21, 2012 at 12:38 PM
အခု သမီးအမေက သွေးတိုးရောဂါ အခံရှိတာကြာပါပြီ။ ရွှေဘိုမှာတုန်းကဆို အရမ်းအေးလွန်းလို့ ခဏခဏ သွေးတက်ပါတယ်။ ရွှေဘိုက ဆရာဝန်ပေးတဲ့ သွေးကျဆေးလည်းပုံမှန်သောက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်ပြီး ကတည်းက သွေးတိုးပျောက်ပြီလို့တောင် ထင်ရတဲ့အထိ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်က နေမကောင်းအရမ်းဖြစ်ပြီး သွေးလုံးဝမတက်ဘဲ သွေးအားနည်းတယ်လို့ အထူးကုဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ သူကတောင် အငံရှောင်တာများလို့ အငံဓာတ်ပါတာလေး နည်းနည်းစားပေးလို့တောင်ပြောပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်း သွေးအရမ်း ဆောင့်ဆောင့်တက်ပါတယ်။
အခု ကောင်းနေ ဘာမှမစားဘဲ ခဏနေ သွေး ၁၇ဝ ၁၈ဝ ထိတက်ပါတယ်။ အခု သွေးကျဆေးပြောင်းသောက်ပြီး သွေးက အပေါ်သွေးကောင်းနေရင် အောက်သွေးကျပါတယ် ဥပမာ120 56 (သို့) 118 58 အဲလိုဖြစ်ပါတယ်။ ညနေ တိုင်းကြည့်ရင် 140 70 (သို့) 140 80 အဲလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က ဆန်ပြုတ်ချည်းစားတာကို ညနေပိုင်းချိန်လိုက်ရင် 140 ကျော်နေတတ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းဆို 120 လောက်ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါ အစားအသောက်လည်းသေချာရှောင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလည်းဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာ့အကြံကိုသိပါရစေ။
သွေးတိုဆိုတာ တာခါတက်ဘူးရင် မကြာခဏ စစ်နေရတယ်။ သွေးတိုးမှာ ပိုအရေးပါတာက အောက်ဂဏန်းဖြစ်တယ်။ တက်လိုက်-ကျလိုက်ဖြစ်နေရင် ပိုသတိထားသင့်တယ်။ အငန်နဲ့ကမတည့်ပါ။ လူနာမှာ အငန်ဓါတ် နည်းနေတာကို သွေးထဲမှာ (ဆိုဒီယမ်) စစ်မှာသာ သိမယ်။ လူကဝရင် အဆီပါရှောင်ရမယ်။ ဆီးချိုကိုလဲစစ်သင့်တယ်။ တကယ်လို့ လူကမဝ။ ဆီးချိုလည်းမရှိရင် အငန်တခုတည်းသာရှောင်ပါ။ ကျန်တာတော့ စားရမယ်။ ရှောင်တိုင်းမကောင်းပါ။ အာဟာရဆိုတာ ပြည့်ဝ-မျှတရတယ်။
မေမေက အခုတလော ညညလည်း အိပ်မပျော်ဘူး။ အစားသောက်လည်းပျက်နေတယ်။ မနက်ခင်း ၁ဝ နာရီလောက် ဆို နားထဲကလေထွက်နေတယ်။ အားဆေးလည်း ၃ မျိုးလောက်သောက်တယ်။ အဲဒါဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတာသိပါရစေ
အားနည်းတာလို့ပြောနိုင်တယ်။ အားဆေးက အထောက်အကူသာရမယ်။ အစာအာဟာရပြည့်ဝ-မျှတဘို့က ပိုလိုမယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်း အသက် ၄ဝ-၄၅ ဝန်းကျင်တွေမှာ ကယ်လ်စီယမ်လဲလိုတယ်။ အိပ်မပျော်တာအတွက် ဆရာဝန်က ရေတိုအတွက် အိပ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ မေမေက ၆၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒါဆို စားချင်စိတ်ရှိအောင် စားပြီး အာဟာရပြည့်ဝဖို့က ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော် ဆရာ
ဟုတ်တယ်။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း အသီးတမျိုးမျိုးစားစေပါ။ ရာသီထွက်အသီးမျိုးကပိုသင့်တယ်။ တခါတလေ အသီးကို အရည်လုပ်သောက်ပေါ့။ အားဆေးတွေက အသီးအနှံ၊ အသီးအရွက်တွေကနေထုတ်ရတာ။ လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်လောက်မကောင်းဘူး။
စိတ်ကျန်းမာအောင်လဲဂရုပြုပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေက ဘာသာရေးအကူအညီကို ပိုယုံကြည်ကြတာက စိတ်ခွန်အား၊ ကုသိုလ်တရားဖြစ်လို့ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အထောက်အကူရစေတယ်။ ဘာသာရေးလို့ပြောတာက သမားရိုးကျ ပုတီးစိတ်တာ မဟုတ်ပါ။ စိတ်လက်ကြည်သာပေါ့ပါးဘို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ မမြင်ရတဲ့ကံတရားအတွက်လဲ အကူညီရဘို့ပြောတာပါ။
သမီး သူငယ်ချင်းဆီကနေ ဆရာ့အကြောင်းသိရလို့ လှမ်းမေးလိုက်တာပါ။ သမီး ASO စစ်တာ 400 ရှိလို့ ဆရာဝန်က ပင်နယ်ဆလင် ထိုးခိုင်းပါတယ်။တစ်ခါထိုးပြီးတော့ အရမ်းနာလို့ မထိုးချင်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ။
တလခံ ပနယ်စလင်ထိုးဆေးက နာတယ်။ တချို့ကလဲ နာတာကို သူများလောက်မခံနိုင်ဘူး။ ပြောပြပါ၊ အားပေးပါ၊ ၁-၂ ရက်နာတာနဲ့ နောင်တချိန်မှာ နှလုံးရောဂါရမှာကို လဲသင့်တယ်လို့။ ဆရာဝန်နဲ့လဲဆွေးနွေးပေါ့။ စားဆေးလဲပြောင်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုးဆေး ၃-၆ လထိုးပြီးနောက်မှ စားဆေး ပေးလေ့ရှိတယ်။
ဆရာ တစ်ချို့က ပင်နယ်ဆလင်ကို ထုံဆေးနဲ့ထိုးတယ်လို့ ပြောတယ်ဆရာ။အဲဒါ ထုံဆေး တစ်ခါထိုး ဆေးတစ်ခါ နှစ်ခါထိုးခံရမှာလားဆရာ။ အဲဒါက တကယ်အနာသက်သာတယ်လားဆရာ။
(ပယ်နယ်စလင်) ထိုးဆေးထဲမှာ ထုံဆေးတခါတည်းပါတာရှိတယ်။ Procaine Penicillin ခေါ်တယ်။ ၁၂-၂၄ နာရီတခ့ထိုးတယ်။ Benzyl Penicillin ထဲမျာတော့ မပါဘူး။ နာတယ်။ ၆ နာရီတခ့ထိုးတာမျိုး။ Benzathene Penicillin ဆိုတဲ့ တလခံဆေးက နာတယ်။ အဆီပါတာမျိုးလဲရှိသေးတယ်။ Streptomycin နဲ့ရောထားတာလဲ ရှိတယ်။ ကနေ့ခေတ်မှာ Syphilis ရောဂါအတွက် နဲ့ လေးဘက်နာအတွက်သာ သုံးတာများတယ်။ ဆေးတိုင်း တည့်-မတည့်စမ်းပြီးမှ ထိုးရမယ်။
ဆရာ တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ဆရာရော ထိုးခံရဘူးလားဟင်။ဆရာဝန်တွေက တကယ်နာသလောက် သိပါ့မလားဆရာ။
Penicillins ပနယ်စလင်များ။ (Benzylpenicillin Na or K injection, Penicillin G Procaine injection) Penicillin V, Phenoxymethyl Penicillin Potassium, Penicillin VK
a ဖြစ်ခါစ ဆစ်ဖလစ် ရောဂါ၊ Penicillin G 12 million units IV QID + Metronidazole 500 mg IV or Orally
b နူမိုးနီးယား၊ Penicillin G 10 million units IV daily x5days
c ဂနိုးရီးယား၊ Penicillin G2million units4hourly IVdဒေါင့်သန်းနာ၊ Anthrax Penicillin G2Million units every3hours IV
d (ဂက်စ်-ဂင်ဂရင်း) ခေါ် အနာပုတ်ခြင်း၊ Penicillin G2million units IV every4hours followed by Amoxacillin 500 mg TDS Orally
e အဆုပ်ရောင်ခြင်း၊ Penicillin G4million units IV every4hours or Penicillin G2million units every2hours IV + Metronidazole 750 mg IV every6hours (or) + Chloramphenicol 1-2 Gm IV every6hours x 6-8 weeks plus Dexamethasone 4-25 mg QID
f ဦးနှောက်ပြည်တည်နာ၊ Penicillin G 8571 to 17142 mg IV/IM Daily; 375 mg/kg IV/IM QID
g မင်နင်ဂျိုက်တစ်၊ နူမိုးနီးယား၊ ပြည်တည်နာ၊ နားကိုက်၊ လေးဘက်နာ၊ အရေပြားအနာ၊ (ရူမက်တစ်) အဖျား၊ လည်ချောင်းနာ၊ နားပြည်ယိုခြင်း၊ ဆုံဆို့နာ၊ အာသီးရောင်၊ ဆစ်ဖလစ်၊ ဂနိုရီးယား၊ နှလုံး အတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရိုး-အဆစ် ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ သွားဖုံးနာ၊ အာသီးရောင်၊ 250-500 mg TDS/QID x 10-14 days; (125 mg/kg QID)
h မကောင်းသောသတ္တိများ = အသက်သေစေနိုင်သည်အထိ ဆိုးသည့် ဆေးမတည့်
ဆရာ ဆေးမထိုးချင်တော့ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ရောဂါကိုပြောပါ။ ဆေးကုပေးတဲ့ဆရာဝန်ကိုလဲ မေးပါ။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ ပနယ်စလင် စားဆေးရှိတယ်။ တကယ်ထိုးမှရမဲ့ရောဂါလဲရှိတယ်။ VDRL +ve ဖြစ်ရင် ဆေးထိုးမှရမယ်။ ဆရာကတော့ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ထိုးတာဘဲ။
အဲဒါဆို ဆရာလဲ လေးဘက်နာရှိတယ်ပေါ့။ မနာဘူးလားဟင်။
နိုးနိုး။ ဆရာ့မှာမရှိပါ။ ကာကွယ်ဆေးမျိုးကို ကိုယ်တိုင်ထိုးတယ်။ လေးဘက်နာအတွက် စားဆေးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။
အော် သမီးဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ကြည့်ဦးမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ဆေးထိုးတဲ့ရက်တွေမှာဆို သမီးမှာ စောင်းလဲမအိပ်ရဲ၊ ပက်လက်လဲ မအိပ်ရဲနဲ့ ဖြစ်နေတာဆရာ။ ဆရာ ပြန်ပြောပေးပါဦး။ ဆေးထိုးပြီးစရက်တွေဆို အရမ်းခံရခက်တယ်။
အနာက်သက်သာဆေး Ibuprofen သောက်ပါ။ ဆေးထိုးလို့ နာတဲ့နေရာမှာ Hot water bottle အပူကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Sat, Dec 22, 2012 at 1:54 AM
Thank you so much for your prompt reply. Please help me with another medical issue. I amafemale, 27 years old, married, no children, living in United States. I would like to know more about metabolism. I have been trying to lose some weight and I think my metabolism is not burning any fats. It also takes mealong time to digest food. It takes me about 3-4 hours to digest food. Please inform. Thank you so much.
Sat, Dec 22, 2012 at 4:05 PM
ကျွန်တော့်အသက် ၃၂။ အိမ်ထောင်ရှိ။ ကလေးမရှိ။ သင်္ဘောသား။ ၅' ၆"။ ၁၄ဝlb။ ဆေးလိပ်သောက်။ အရက် social drink။ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်နေ့ တစ်နာရီခန့်လုပ်သည်။
၁။ ကြက်သွန်ဖြူကလူနဲ့ တည့်တယ် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတာလဲရှိလို့ တစ်နေ့ဘယ်လောက် အများဆုံးစားသင့်တယ်ဆိုတာရှိပါသလား။ ကျွန်တော်က တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ တစ်လုံးနီးပါး ပမာဏလောက် စားဖြစ်နေလို့ပါ။ နောက်ပြီး ဒီအတိုင်းကိုက်စားတာဆိုတော့ စိုက်တုန်းက ဓာတ်မြေသြဇာတွေ ပိုးသတ်ဆေးတွေကြောင့် လူကိုထိခိုက်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသလားဆရာ။
၂။ ကျွန်တော့် ခါးရိုး (spine) ခလယ်ကနေ ဇက်နားထိ နာနေတာ ၂လလောက်ရှိပါပြီ။ ဘေးက muscle တွေလဲ အထိုက်အလျောက်နာပါတယ်။ Aceclofenac ၂ ပါတ်လောက် သောက်တာမပျောက်လို့ Diclofenac သောက်တာလည်း ၁ဝ ရက်လောက်ရှိပါပြီ။ မပျောက်သေးပါဆရာ။ ဘာဆေးများသောက်ရမလဲ။ ဘာရောဂါဖြစ်နိုင်လဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ခုသင်္ဘောပေါ်မှာမို့လို့ နားနားနေနေတော့ နေလို့မရပါဘူး။
၃။ ခုတလော လူက ခေါင်းတွေအုံ ခေါင်းတွေကိုက် ခေါင်းတွေကျင် မျက်ရိုးတွေကိုက် ဇက်ကျောတွေတက်နေပါတယ်။ အရင်ကလည်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် အရင်က အိပ်လိုက်ရင်သော်လည်းကောင်း Ibuprofen သောက်လိုက်ရင် သော်လည်းကောင်း ပျောက်သွားပေမယ့် ခုရက်ကကြာနေပါပြီ။ တစ်ပါတ်လောက်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် မျက်မှန်သမား မဟုတ်ပါ။ အနီးအဝေးမမှုန်ပါ။ computer တော့အကြည့်များပါသည်။ ခု Ibuprofen, Piracetam, Neurobion ဆေးများကို တစ်နေ့ နှစ်လုံးသောက်နေပါသည်။ သိပ်တော့မသက်သာပါ။ ဘာဆေးများသောက်ရမလဲဆရာ။
၄။ ထို့ပြင် Centrum (multivitamin), Omega3နှင့် Glucosamine+Chondroitin+MSM (အရိုးအဆစ်အားဖြည့်ဆေး) များကိုလည်းနေ့စဉ် သောက်သုံးနေပါသည်။ ကျွန်တော်သိလိုသည်မှာ အထက်ပါဆေးများအားလုံး အတူတူတွဲ၍ သောက်သုံးလို့ ရမရ။ မည်သည့် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ ထွက်လာနိုင်ပါသလဲဆရာ။
ခါးရိုးမှာဖြစ်နေတာက အနာအကိုက်ပျောက်ဆေးသောက်ပေမဲ့ မပျောက်သေးဘဲ ဆေးလဲ မစစ်ရရသေးရင် ပြောဘို့ခက်ပါတယ်။ ဓါတ်မှန်၊ အာလ်ထွာဆောင်း တခုခုလုပ်မှ သိမယ်။
Blood pressure သွေးဖိအား သိပါသလား။
Glucosamine sulfate ဆေးက အိပ်ချင်မယ်။ ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်မယ်။ အစာမကျေဖြစ်မယ်။ အရေပြား အနီစက်ထွက်မယ်။ နေရာင်ကိုသိပ်မခံနိုင်ဘူး။ လက်သည်း-ခြေသည်းတွေ မာမယ်။ သွေးဖိအားတက်မယ်။ ရင်ခုန်မြန်မယ်။ တချို့က ပျို့-အန်ချင်တယ်။ ဝမ်းချုပ်တယ်။ ဝမ်းလျှောမယ်။
Thank you very much for your prompt reply. My blood pressure is about 90/130. I hope i can go home afterafew weeks and check my health conditions taking X-ray and ultrasound. But I still want to know about garlic.
It should be 130/90 mmHg. It is border line and you need to check BP regularly and have low salt diet for life.
ကျွန်တော့် သမီးလေးဟာ အသက်သုံးလရှိပါပြီ။ ယခုရက်ပိုင်းမှာ လျှာခဏခဏထုတ်နေပါတယ်။ ဘေးနားက အသိတွေပြောတာကတော့ သူငယ်နာလို့ပြောပါတယ်။ သူငယ်နာဆိုတာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်လဲဆရာ။ သမီးလေး လျှာထုတ်ထုတ်နေတာဟာကြီးရင် ဘာဆက်ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ သိပါရစေ။ အခြား ကျမ္မာရေးကတော့ ကောင်းပါတယ်။
သွားရည်ကော ကျပါသလား။ လျှာမှာ ဖွေးနေသလား။ ဒီလိုဖြစ်နေရင်တော့ မှတ်ခရုခေါ်တယ်။ နို့ပွေးလို့လဲခေါ်တယ်။ လျှာကို အဝတ်သန့်လေးနဲ့ သန့်ရှင်းပေးတာနဲ့ ပျောက်သွားပါမယ်။ အဲလိုမဟုတ်ရင် ကလေးမွေးရာပါ (ဒေါင်း-ဆင်ဒရုမ်း) မဟုတ်ရင် သူ့ဖါသူ ပျောက်မှာပါ။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ မြန်မာတွေ သူငယ်နာဆိုတာ ကလေးငယ်တွေတခုခုဖြစ်တိုင်း ယေဘုယျ ပြောကြတာမျိုးပါ။
Mon, Dec 24, 2012 at 9:25 AM
ဆရာ စနေနေ့က ဆေးထိုးရတယ်။ ကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ အပ်ကသေးနေလို့ဆိုပြီး နှစ်ဖက်ခွဲထိုးရတယ်။ ဆရာဝန်ကို ဆေးသောက်လို့ ရမလားဆိုတော့ ASO 450 မို့ တစ်နှစ်လောက်တော့ ထိုးသင့်တယ်တဲ့။ ဆရာက ရေနွေးပုလင်းကပ်ဆိုတော့လဲ သမီးက အဲဒီနေရာကို မထိရဲဘူး။ ဆရာဝန် ချေပေးတော့လဲ မခံနိုင်ဘူး။ အိပ်ယာပေါ်ကနေလဲ တော်တော်နဲ့ မထနိုင်ဘူး။ အဆောင်မှာဆိုတော့ ဘယ်သူမှလဲမရှိဘူး ဆရာ။ ဆရာပြောတဲ့ ဆေးကလဲ ဝယ်မရဘူး။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပျက်တယ်။ ဒီနေ့မှပြန်တက်တာဆရာ။ အခုထိ ဖျားတုံးရှိသေးတယ်။
ဟုတ်မယ်။ ဒီဆေးက ပြစ်လို့ ဆေးထိုးရတာ သတိထားရတယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး။ စိတ်အားမငယ်နဲ့။ လူတွေဟာ အနာခံနိုင်တာ မတူကြဘူး။ Paracetamol ဆေးလဲ သောက်နိုင်တယ်။ အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေးမျိုးက လူတိုင်း၊ အိမ်တိုင်းမှာ ရှိတတ်တယ်။
Tue, Dec 25, 2012 at 2:55 PM
သမီးအခု ကိုယ်ဝန် ၇ လ ထဲမှာပါ။ နှာအရမ်းမွှန်နေလို့ တခြားဆေးလဲရမ်းမသောက်ရဲပါဘူး။ အိပ်တဲ့အခါမှာလည်း ခါးနဲ့တင်ပါးနေရာက ညောင်းညာအားလျော့သလိုဖြစ်နေလို့ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာ့ဆီက အကြံဥာဏ်လေး တုန့်ပြန်မှုကို မျှော်လင့်နေပါ့မယ်ဆရာ။ ဆရာ့ရဲ့ဆောင်းပါးအချို့ကို print ထုတ်ထားပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ဖတ်မှတ်လေ့လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် နှာမွှန်ဖျားနာမှုကိုဘယ်လို take care လုပ်ရမယ်ဆိုတာလေး ဖြည့်စွက်အကြံပြုပေးပါအုံးရှင့်။
ကျွန်တော့် အမျိုးသမီးအကြောင်းလေးပြောပြပြီး မေးချင်လို့ပါ။ အသက်က ၃ဝ ပါ။ ချောင်းဆိုးတာ ၃ လလောက်ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် နေ့ဘက်ဆိုးတာမဟုတ်ဘဲ ညအိပ်မှ ဘဲဆိုးတာ ဆေးခန်းလည်းပြတာစုံနေပြီ မသက်သာဘူးဖြစ်နေတယ်ဆရာ။
သမီးအစ်မက မျက်ရိုးတွေ တအားကိုက်နေလို့ဆိုပြီး မျက်စိဆရာဝန် သွားပြတာ နှစ်ဖက်လုံးမှာ ရေတိမ်ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ diamox 0.25 g ကိုတစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်သောက်ခိုင်းပါတယ်။ aristomol မျက်စဉ်းလဲ နှစ်ကြိမ်ခတ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒါ ဆရာဝန်က မှာလိုက်တယ်တဲ့ ဆးသောက်ပြီးရင် ခြေထောက်တွေ ထုံနေလိမ့်မယ်လို့မှာလိုက်တယ်တဲ့။ အခု ထုံလဲထုံနေတယ်တဲ့ဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ ရေတိမ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးထးတာရှိရင် Attach တွဲပေးပါဦးဆရာ။ သူက မျက်မှန် တပ်ရတယ်ဆရာ။ အဝေးမှုန်ပါ။ အသက်က 35 နှစ်ပါ။ အပျိုပါဆရာ။ မျက်မှန်တပ်တာက 10 နှစ်လောက်ရှိပြီ။ မျက်စိ ဆရာဝန်နဲ့က ၂ နှစ် တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ပြဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။
ကျွန်မက အရမ်းပိန်လို့ပါ။ အရပ်က5ပေ 1 လက်မပါ။ ပေါင်ချိန် 88-89 ပဲရှိပါတယ်။ အသက်က 26 နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်လည်းရှိပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့က တစ်နယ်စီပါ။ marvelon28 သောက်ပါတယ်။ ကလေးတော့ လုံးဝမယူရသေးပါဘူး။ အိမ်ထောင်ကျတာ 1 နှစ်နီးပါးတော့ရှိပါပြီ။ အဲဒါနဲ့လည်းဆိုင်မလားလို့ပါ။ ကျွန်မက နဂိုကလည်း ပိန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပိုပိန်သွားလို့ပါ။ ကျွန်မ အလုပ်က အထိုင်လည်းများပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု သိပ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါ ဘာဆေးသောက်သင့်လဲ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
မေမေ့ x-ray အဖြေနဲ့ CT Scan အဖြေကို ကျေးဇူးပြုပြီး စစ်ပေးပါအုံးရှင့်။ အထူးကုကတော့ x-ray အဖြေမကောင်းရင် CT ရိုက်မယ်ပြောပြီး x-ray ကိုကြည့်ပြီး CT ထပ်ရိုက်ခိုင်းတယ် ဆရာ။ CT ရိုက်ပြီးတော့မှ ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်ကြီးက result ရေးပေးတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုပြီး ဆေး ၁ဝ ရက်သောက်ခိုင်းထားတယ်။ ဆေးသောက်ပြီးရင် ကောင်းသွားမယ်တဲ့။ နှာခေါင်းထဲထည့်တဲ့ဆေးလဲ တစ်နေ့ ၃ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၄ ကြိမ်ထည့်လဲရတယ်လို့ပြောတယ်။ မေမေကနှာခေါင်းမှာအနာရှိပုံရတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီး စစ်ပေးပါအုံးနော်။
ညာဘက် (မက်ဆယ်လရီ-ဆိုင်းနပ်စ်) မှာ ပြည်ရှိနေတယ်။ (ကယ်လ်စီဖီကေးရှင်း) ဖြစ်စဉ် ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ထူ-ပိတ်နေတယ်။ ကျန်တာကောင်းတယ်။
စိုးရိမ်စရာရောဂါကြီး မဟုတ်ပါ။ (ဆိုင်းနပ်စ်) ရောဂါသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးနဲ့ သက်သာပါမယ်။ လိုရမယ်ရ ဆရာရေးထားတာ ပို့လိုက်ပါတယ်။
သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးခိုင်းလို့ပါ။ သူက တစ်နေ့ကို လေ့ကျင့်ခန်း 45 မိနစ်လောက်လုပ်ပါတယ်တဲ့။ အိပ်ထမတင်၊ ခါးလှဲ့၊ပေါင်လွှဲ ၊အေရိုးဗစ် စတာတွေလုပ်တာပါ။ သူကနေ့တိုင်းလုပ်သင့်ပါသလားတဲ့။ ရာသီလာတဲ့ရက်တွေနဲ့၊ ညောင်းကိုက်နေတဲ့နေ့တွေမှာရော လုပ်သင့်ပါသလားတဲ့။ အသက်က 34 ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ ဘာရောဂါမှလဲ မရှိဘူး ဆရာ။